Dunida cusub ayaa laga helay nidaamkayaga qorraxda, waxaadna ka caawin kartaa magaca - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA Dunida cusub ayaa laga helay nidaamkayaga qorraxda, waxaadna ka caawin kartaa magaca - BGR
Ahaanshaha oggolaanshaha in si rasmi ah loo magacaabo jidhka qorshaynta jirka ayaa ah mudnaan gaar ah oo aan dhif aheyn. Qorshayaasha New, biladaha iyo waxyaabo kale oo waaweyn oo laga helo booska waxaa badanaa lagu magacaabaa qofka ama kooxdii iyaga soo hayay, laakiin qaar badan oo ka mid ahna weligood si rasmi ah uma magacaabin, iyagoo haysta calaamadooda cilmi ahaan loo qoondeeyey sanado.
meeraha yar yar 2007 OR10 waa mid ka mid ah kuwa adduunka, iyo inkasta oo markii hore laga helay July 2007, waligeed ma helin magac rasmi ah. Hadda, helitaankiisa waxa uu doonayaa talo soo jeedin magaciisa, oo waad caawin kartaa .
Cilmi-baarayaasha Meg Schwamb, Mike Brown iyo David Rabinowitz ayaa markii ugu horeysay ee lagu ogaado 2007 OR10 oo ku dul yaala nidaamkayaga qorraxda ee aagga loo yaqaan Kuiper Belt. Suunka waxaa ka buuxsamaya burbur iyo adduunyo balaadhan oo ah cabbirka masaafo yar, laakiin 10 OR2007 waa sheyga ugu weyn ee noocan ah ee aan weli laheyn magac rasmi ah.
Gudbinta magaca meeraha ayaa ah wax aad u adag, xitaa dadka ay ka heleen. Shuruudaha qaarkood waa in la dhammaystiraa ka hor inta Ururka Caalamiga ah ee Astronomical Union uu aqbalo magac, sidaas awgeed saynisyahannadu waxay soo jeediyeen seddex magacyo oo suurtogal ah oo ku habboon: - Gonggong, Holle iyo Vili.
Saddexda magacyadoodu waa kuwa ugu da 'weyn. ilaahyo asal ah oo kala duwan, waxaadna ka baran doontaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan magac kasta bogga magaciisa rasmiga ah . Kadib markaan dib u eegno waxyaabaha gaarka ah ee meeraha yar yar iyo barashada magaca magac kastoo macnihiisu yahay, waxaad u codeyn kartaa naaneyska adiga kugu habboon.
Sahanku wuxuu u furan yahay illaa bil bil ah. codkaaga ka hor saqda dhexe habeenkii wuxuu noqon karaa 10 haddii aad rabto inaad tiriso. Iyadoo aan loo eegin magacii la doortay, waxaa loo gudbin doonaa IAU sida soo-jeedin rasmi ah ee magaca AMA 2007 ee ay ku raadineyso oo ay leedahay fursad aad u wanaagsan oo ah inay noqoto magaca rasmiga ah ee adduunka cusub.